Maitiro ekubvisa akakurudzira mazita kana uchigovana zvemukati muIOS 14 | IPhone nhau
Maitiro ekubvisa akakurudzira mazita kana uchigovana zvemukati muIOS 14
Siri rubatsiro chikomborero kune vazhinji ve ins uye kunze kweIOS neIpadOS. Maitiro aunonzwisisa mafambiro edu, maitiro edu uye edu ezuva nezuva mabasa akakosha ekuita iyo chaiyo mubatsiri kukwana zvakakwana. Nekudaro, pane zvakawanda zvehungwaru sarudzo zvinobata miganho yekuvanzika yevashandisi vazhinji uye zvakare ichokwadi kuti pane zvakawanda zvezvisarudzo izvo zvisingakwanise kubviswa nekuzvidira mumisangano. Imwe yesarudzo idzi ndeiyi Yakanyorerwa kutaurirana kana uchigovana zvemukati inopihwa naSiri. Ne iOS 14 sarudzo yekudzima iyo inosanganisirwa, tinokuudza maitirwo azvo.
Bvisa yakataurwa mazita paunenge uchigovana muIOS 14
Kwemakore, vashandisi vazhinji vakatora chikamu mumaforamu eApple ehurukuro. Mune maforamu aya, mibvunzo inobvunzwa pamusoro pekuti chiito chingatorwa here kana kuti kwete. Mumwe wemibvunzo iyoyo wakadzokororwa mumakore apfuura waive kana vokukurukura vaigona kubviswa panogovaniswa menyu yekugovana. Vashandisi ava vakapomera kudiwa kwekugona kuvabvisa nekuti zvinokanganisa zvakavanzika zvevashandisi zvishoma uye, dzimwe nguva, zvimwe zvakavanzika zvinodikanwa pakuratidzira mamamenyu aya.
Kusvikira iOS 14 zvaisaita kubvisa iyi menyu iyo yaitaridzwa otomatiki patakadzvanya pane yekugovana menyu mune chero iOS nzvimbo. Kunyange zvakadaro, kusvika kweIOS 14 kunokutendera kuti ubvise iwo akataurirana Siri. Kugona kutevera anotevera matanho zvakafanira vane iOS 14 kana iPadOS 14 yakaiswa pane yako kifaa. Wobva watevera matanho ari pazasi:
Pinda iyo iOS 14 Zvirongwa uye wobva watsvaga iyo Siri uye Tsvaga chikamu
Rova zvakasimba pasi kusvikira wawana Muterere Mazano eSiri
Sarudza "mazano ako kana uchigovana"
Nenzira iyi, takakwanisa kubvisa iyo menyu yekutaurirana kubva kumenu yekugovana, nokudaro tichibvumira vashandisi zvakavanzika zvishoma zvekushandisa kwechigadzirwa chavo kana vachigovana chero mhando yezvirimo. Tinokuyeuchidza kuti basa iri rinogona chete kushandiswa pamidziyo ine iOS 14. Kana iwe usina yeruzhinji beta yakaiswa, uchafanirwa kumirira kuvhurwa zviri pamutemo mumatsutso egore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekubvisa akakurudzira mazita kana uchigovana zvemukati muIOS 14
Jeser Roberto akadaro
Rakanakisa ruzivo rwakaita zuva rangu
Pindura Jeser Roberto
Pegatron ichave nechirimwa muIndia kugadzira iyo iPhone
Logitech's Folio Touch, iyo keyboard ine trackpad yeiyo 11-inch iPad Pro, yave kuwanikwa